Chu Zim December 15, 2021 at 9:06 PM
လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်လောက်ကို ပြန်သွားရင်တော့ ခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကို သူပုန်တွေ၊ သောင်းကျန်းသူတွေဆိုပြီး ဆဲတဲ့သူဆဲနေပြီ၊ တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့ စစ်သားကြီးတွေအတွက် ပရိုဖိုင်ချိန်းသူ ချိန်းနေပြီ၊ အွန်လိုင်းလော်ဘီတွေကလည်း ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက် အလှူငွေတွေ ကောက်ခံနေပြီ၊ မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းပြသူတွေမှာလည်း ငါတို့ကိုယ်တိုင်လက်နက်ကိုင်ပြီး စစ်တပ်က ဝင်တိုက်လိုက်ချင်တယ်လို့ ကြိမ်းတဲ့သူကြိမ်းနေပြီ။ စစ်တပ်ဘုန်းတော်ဖွဲ့ကဗျာတွေ ရေးတဲ့ကောင် ရေးနေပြီ။
ခုချိန်ကျတော့လည်း ဒါတွေက နောက်ထပ်သော အခြားကမ္ဘာတစ်ခုလိုပဲ။ စစ်တပ်ဘက်က အမြဲရပ်တည်ပေးနေခဲ့တဲ့ အများစုသော ဗမာပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်က စစ်တပ်ကို နာကျည်းမုန်းတီးသွားတာ၊ ဒီအခြေအနေကိုလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်ဖန်တီးယူခဲ့တာပဲ။ စစ်သားတွေတိုက်ပွဲကျလို့ ကြက်ဥကြော်ပရိုဖိုင်တွေ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ် ဝေဆာဖို့ဆိုတာ အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။ ဒါက ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းမှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးရဲ့ ပထမဆုံးသော မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်လေးလို့ ဆိုရမယ်။ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ထင်ရပေမယ့် အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ထွန်းဖို့ အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံရေးရေချိန်အရွေ့ပါပဲ။
crd arr mann
San Zuren December 16, 2021 at 12:15 AM
Dar Dar December 17, 2021 at 6:33 AM
miss the old time😢
သိပ်မှန်တယ် အခုချိန်အမုန်းဆုံးလူသားပြပါဆိုမအလနဲ့ စခ ​တွေပဲ
Htet Wai lwin January 20, 2022 at 5:16 AM
အရင်တုန်းက အချိန်တွေဟာ နောင်တရစရာ စိတ်နာစရာတွေချည်းပဲ မအေလိုး မအလ
Unknown January 20, 2022 at 5:20 AM
June January 20, 2022 at 5:26 AM
Mnai's January 23, 2022 at 7:18 PM
Ko Ko San April 15, 2022 at 8:01 AM
ခင်ဗျားတို့ဆိုတာလည်း ရရင်ရသလိုပါးပါးပုတ်တယ်။ ကြက်ဥ​ကြော်ချိန်းတာ အစကတည်းက အစိမ်း​တွေ အများစု ဆိုတာသိသင့်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ နီပိန်းဆိုပြီး​​စော်ကား​မော်ကား​ခေါ်ခဲ့ကြတာ​တွေကြဘာ​ပြောမလဲ။ အမြင်မတူ ​တော်လှန်​ရေးနည်း လမ်း​ကြောင်းမတူတဲ့ကိစ္စ​တွေကို ဒီအချိန်မှာဒါ​တွေက​ပြောစရာလား​ဗျာ ပြောသင့်တဲ့အချိန်လား မ​ပြောသင့်တဲ့အချိန်လား ​တောင်မစဥ်းစားနိုင်ဘူး။ မတရားသဖြင့် မဟုတ်မဟတ် တဖက်သတ်စွတ်စွဲ​နေတာ​​​တွေလည်းခုချိန်မျိုးမှာ နားထားသင့်တယ်ဗျာ။ ဒုက္ခမျိုးစုံ ခါးစီးခံ​နေရချိန် ပိဿ​လေးနဲ့​ကောက်ထု​နေသလိုပဲ။
Sandar April 21, 2022 at 6:23 PM
ဆု December 16, 2021 at 3:43 AM
M April 16, 2022 at 6:43 AM
Htet Htet December 16, 2021 at 9:35 PM
Man Lun December 17, 2021 at 1:12 AM
ဝမ်ရိပေါ်မိန်းမ���� January 23, 2022 at 10:59 PM
Unknown April 20, 2022 at 9:30 AM
Thazinmoe December 17, 2021 at 10:55 PM
Dar Dar December 18, 2021 at 5:55 AM
AUNG December 18, 2021 at 8:21 AM
Sammi December 18, 2021 at 8:45 AM
Sammi January 19, 2022 at 11:12 PM
​ပျောက်ဆုံး​နေတဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ပြန်တိုက်ယူကြမယ်
Myint Win December 18, 2021 at 10:23 AM
ရတနာအောင် December 18, 2021 at 4:33 PM
ဒီချိန်မှာခြံစည်းရိုးခွထိုင်သူဆိုမရှိတော့ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဖြူ အမဲ ကသည်းကွဲသွားကြပြီ အယောက်ချင်းစီ စာမေးပွဲစစ်ခံရလို့ အဖြေထွက်နေကြပြီ မင်းက ဓမ္မဘက်တော်သားလား အဓမ္မသမားလားပေါ့
လက်ဆောင် ရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
MT December 18, 2021 at 7:37 PM
Yamin December 19, 2021 at 12:52 AM
Fedeforce December 19, 2021 at 12:56 AM
Create post for all
Su Su December 19, 2021 at 5:31 AM
Win December 19, 2021 at 8:29 PM
Aye Zaw Thu December 20, 2021 at 3:53 AM
KMT December 20, 2021 at 5:43 AM
AUNG December 20, 2021 at 7:42 AM
Thar Htwe December 20, 2021 at 7:38 PM
Unknown January 19, 2022 at 11:06 PM
Tin Win YTS January 19, 2022 at 11:20 PM
Unknown January 19, 2022 at 11:20 PM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 19, 2022 at 11:24 PM
"မတူကွဲပြားမှုနှင့် အငြင်းပွားမှုတွေဆိုတာ ဖျောက်ဖျက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို ဖျောက်ဖျက်ပစ်စရာလည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ကြိုးစားကြရာမှာ အချင်းချင်း အလေးထားမှု၊ အခြားသူတွေရဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို လျော့ပါးမသွားစေရန် ကာကွယ်ပေးမှု၊ ရွာရဲ့ ရှားပါးသယံဇာတတွေကို အလွဲသုံးစား မလုပ်ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းမှု စတဲ့ အပြုသဘောဆောင်မယ့် ပြောင်းလဲမှုတွေ များပြားလာရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ တောထဲမှာ လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းနိုင်တဲ့ ငှက်တစ်ကောင်လို ပြန်လည်ခံစားရတော့မှာ အသေအချာပါပဲ။"
Unknown January 19, 2022 at 11:29 PM
Dr.Win Htun January 19, 2022 at 11:39 PM
Freya Phyo January 19, 2022 at 11:40 PM
IO January 19, 2022 at 11:42 PM
we need more people to click
နေမင်း January 20, 2022 at 12:12 AM
Zin January 20, 2022 at 12:17 AM
Khine Moe January 20, 2022 at 12:27 AM
Khin Maung Kyaw January 20, 2022 at 12:35 AM
ဘေအကူညီလေးထပ်တောင်းပါရစေခင်ဗျ 09892127703နည်းနည်းလောက်အဆင်ပြေတဲ့သူလေးတွေနည်းများအဓိကမထားဘဲကူညီပေးကြပါအုံးဗျ အလုပ်တွေလဲမလုပ်ရဘဲနားထားရတော့တကယ်ခက်ခဲလာလို့ပါဗျ အားနာပေမဲ့ အားလုံးကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်
Su yimon January 20, 2022 at 12:56 AM
Myate January 20, 2022 at 1:07 AM
Finding for our freedom.
Mai Kyi Nwe January 20, 2022 at 1:26 AM
Min Kyaw Thu Htay January 20, 2022 at 1:29 AM
Dan Bauk January 20, 2022 at 1:37 AM
Daw Su Su Htway January 20, 2022 at 1:41 AM
Unknown January 20, 2022 at 1:43 AM
shwe January 20, 2022 at 1:48 AM
Zaw Htwe January 20, 2022 at 2:13 AM
TAVOYAN January 20, 2022 at 2:20 AM
WeMustWin C2D 👏👏👏
dawsawhla January 20, 2022 at 2:25 AM
sweswe January 20, 2022 at 2:48 AM
kono dio da January 20, 2022 at 3:10 AM
ads တခုကြည့်ပီးတိုင်း appထဲကနေသူ့အလိုလိုထွက်သွားလို့ အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဖြေပေးကြပါအုံး။။
ကြင်စိုးကိုပြုတ်သောက်ပစ်မယ် (ဆားမခပ်ဘူး) January 20, 2022 at 6:43 AM
ကျွန်တော်လဲအဲလိုပဲ feeds ကိုပိုလုပ်ပေးပါ
Jully mon April 16, 2022 at 12:41 AM
ငှင့် ကြင်စိုးပြုတ်ရည်တဲ့ ရွံစာကြီးဆားမခပ်ရင် နံမှာပေါ့ လို့။😅😅😅
Unknown January 20, 2022 at 3:54 AM
Unknown January 20, 2022 at 4:25 AM
PaPaWaDe January 20, 2022 at 4:28 AM
Zin Ko Lwin January 20, 2022 at 4:36 AM
နံနံပင်အရမ်းကြိုက်တယ် January 20, 2022 at 4:36 AM
Hla Hla Nue January 20, 2022 at 4:41 AM
Saw San Myint January 20, 2022 at 4:44 AM
Unknown January 20, 2022 at 4:44 AM
Thet Oo January 20, 2022 at 5:04 AM
Htet Wai lwin January 20, 2022 at 5:13 AM
Su January 20, 2022 at 5:26 AM
NAK January 20, 2022 at 5:31 AM
Lwin Lwin January 20, 2022 at 5:34 AM
Ni Ni Phoenix January 20, 2022 at 5:46 AM
TT January 20, 2022 at 5:51 AM
အုံး ဆိုတဲ့အသံကြားလိုက်ရင် အရမ်း​ပျော်တယ် အသံကြားတာနဲ့ ဂါထာရွတ်ပြီး မြို့ပြ​ပျောက်ကြားအဖွဲ့​တွေ PDF က​လေး​တွေ ​ဘေးကင်းကြပါ​စေ ဆု​တောင်းတယ် အနီးနား​ရောက်လာရင် ကူညီဖို့အသင့်ပါ
Unknown January 20, 2022 at 6:04 AM
Su Khit January 20, 2022 at 6:05 AM
ACpower January 20, 2022 at 6:06 AM
Nway Oo Mhan January 20, 2022 at 6:30 AM
ZawTunNaing January 20, 2022 at 6:37 AM
Man Lun January 20, 2022 at 6:49 AM
SD January 20, 2022 at 7:37 AM
Unknown January 20, 2022 at 7:42 AM
Good Night all clicker 😍❣️💪 Fighting ❣️💪💪💪
Myothura January 20, 2022 at 7:53 AM
thurein January 20, 2022 at 8:30 AM
Unknown January 20, 2022 at 11:00 AM
Unknown January 20, 2022 at 1:39 PM
Unknown January 20, 2022 at 9:46 PM
အဆင်ပြေရင် ဘေ အလှူခံ ချင်ပါတယ်ရှင်
Unknown January 21, 2022 at 12:43 AM
Unknown January 21, 2022 at 3:01 AM
များများ click မြန်မြန်အောင်မည်
Hla Hla Nue January 21, 2022 at 3:31 AM
Chan Myae Thu January 21, 2022 at 4:45 AM
Unknown January 21, 2022 at 5:57 PM
ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေအများစုက ပျော်ပါးသောက်စားနေကြတယ် သူတို့နဲ့ မဆိုင်သလိုပဲ
မပြည့်စုံတဲ့သူတွေကျ တော်လှန်ချင်စိတ် မခံချင်စိတ်နဲ့
နှမ်းတစ်စေ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပါဝင်ပေးနေကြတယ်
စိတ်ဓာတ်တော့ မကျပါဘူး အဆုံးထိ တိုက်မယ်
kk January 21, 2022 at 11:28 PM
ဝမ်ရိပေါ်မိန်းမ���� January 23, 2022 at 10:58 PM
Hla Hla Nue January 25, 2022 at 7:50 PM
Unknown March 3, 2022 at 1:34 AM
Unknown April 15, 2022 at 7:06 AM
Okkar April 15, 2022 at 7:15 AM
CHE GUEVARA April 15, 2022 at 7:31 AM
Unknown April 15, 2022 at 7:43 AM
Pick Me April 15, 2022 at 8:15 AM
Click2Donate April 15, 2022 at 8:35 AM
Raungni ma pate Khin ka phat fuu pr tl ..
Amelia Rose April 15, 2022 at 10:22 AM
There’s nothing here ထိရောက်ပြီး အဲဒီအောက်က Home ကို သွားရအုံးမှာလားရှင့်
Home မသွားဘဲနဲ့ 10sec နေတာနဲ့ ပိုက်ဆံရလားရှင့်
Jully mon April 16, 2022 at 12:45 AM
10 sec စောင့်ရင် ရပါပြီ
Myint Win April 15, 2022 at 10:54 AM
Jully mon April 16, 2022 at 12:48 AM
kyaw April 16, 2022 at 7:36 AM
Jasmine April 16, 2022 at 8:07 AM
Minmyatsan April 16, 2022 at 8:40 AM
ေစာ(အဝါရောင်မြေ) April 17, 2022 at 1:58 AM
Kyawthiha April 18, 2022 at 7:52 AM
MyoOo April 18, 2022 at 7:56 AM
Tu Tu's Daddy April 18, 2022 at 9:25 AM
Qlik to Dune
Neon April 18, 2022 at 10:13 AM
Siam It April 18, 2022 at 10:14 AM
leomyanmar April 19, 2022 at 6:16 AM
Sai Min Oo April 20, 2022 at 6:19 AM
Unknown April 20, 2022 at 7:41 AM
PaPaWaDe April 20, 2022 at 7:43 AM
Unknown April 20, 2022 at 8:10 AM
MyoOo April 20, 2022 at 9:15 AM
မင်းသုတအောင် April 20, 2022 at 9:33 AM
ja see say April 20, 2022 at 9:22 PM
Sandar April 21, 2022 at 6:27 PM
Unknown April 22, 2022 at 6:43 AM
Don't mind me.I'm just singing April 22, 2022 at 6:48 AM
i'm still the same me, i'm here as the same me as before, but the overgrown lie is trying to swallow me.
Unknown April 22, 2022 at 5:52 PM
Unknown April 23, 2022 at 2:01 AM
PaPaWaDe April 25, 2022 at 7:05 AM
Unknown April 25, 2022 at 8:21 AM
MyoOo April 25, 2022 at 9:50 AM
Oliver April 25, 2022 at 6:01 PM
Ba soee April 26, 2022 at 1:02 AM
Click for victory
Nway Hlaing Thoone April 26, 2022 at 2:32 AM
ပြည်တွင်း Clicker များ ငွေကြေးမလှူနိုင်အောင် အဖက်ဖက် က ကြပ်တည်းလာလို့
ပိုမိုအာရုံစိုက် Click ကြသင့်ပါကြောင်း
MyoOo April 26, 2022 at 2:57 AM
linnsatt April 26, 2022 at 6:16 AM
Telegram Link တောင်မကလစ်ဖြစ်တာကြာနေပြီ
Hnin Yee May 1, 2022 at 8:22 PM
Let us all join together 😊❤️💖👏👏👌👍🙏💞😊
Hnin Yee May 1, 2022 at 8:23 PM
Let us all join together 😊❤️💖👏👌👍😊❤️💖❤️
Panlay May 4, 2022 at 9:21 PM
Hnin Yee May 4, 2022 at 9:33 PM
Let us all join together and encouragement to Democracy
Hnin Yee May 4, 2022 at 9:34 PM
We must Win 😀😁😊😘❣️♥️🙏
Boseintun May 9, 2022 at 3:06 AM
Revolt, Burma May 10, 2022 at 7:52 PM
Walk on, folk.